Tue, Jul 14, 2020 at 3:51am
सुर्खेत। दैलेखको आठबीस नगरपालिका–१ सात्तलाका ३५ वर्षीय युवकलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको पाँच दिनपछि शुक्रबार कोरोना विशेष अस्पताल सुर्खेत ल्याइयो। सङ्क्रमितलाई तोकिएका अस्पतालमा नलगी विद्यालयमा बनाइएका मापदण्ड नपुगेका आइसोलेसनमा राखिएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि उनलाई सो अस्पताल ल्याइएको हो। त्यसअघि ती युवकलाई दैलेखको नारायण नगरपालिका–८ स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा राखिएको थियो। प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा डम्बर खड्काका अनुसार सङ्क्रमित युवा चिकित्सकसहित..
काठमाडाैं, १० जेठ । नेपालमा शनिबार बिहानै ३२ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शनिबार बिहानै ८:४० बजे विज्ञप्ति जारी गरेर थप ३२ जनामा काेराेना भाइरसकाे संक्रमण पुष्टि भएकाे जानकारी दिएकाे हाे। याेसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कूल संख्या ५ सय ४८ पुगेको छ।..
भक्तपुर, १० जेठ। एक महिला जनप्रतिनिधिलाई नै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि भक्तपुर नगरपालिका उच्च सर्तकता अपनाइएको छ । भक्तपुर नगरपालिका जनस्वास्थ्य केन्द्र च्यामासिंहमा जनप्रतिनिधि, सफाई कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मचारीको कोरोना परीक्षण गराउने क्रममा ती महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । भक्तपुर नगरपालिका–९ का ४२ वर्षीया महिला जनप्रतिनिधिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको सोही वडाका वडाअध्यक्ष रविन्द्र ज्याख्वाले रातोपाटीलाई जानकारी दिएका छन् । वडाअध्यक्ष ज्याख्वाले..
बैतडी। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका एकजनामा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ। गत वैशाख १५ गतेदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका शिवनाथ गाउँपालिका–२ का २२ वर्षीय युवकमा पिसिआर पोजेटिभ आएको हो। थ्रोट स्बाब संकलन गरी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पिसिआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आएको जिल्ला अस्पतालका प्रमख डाक्टर वसन्तराज जोशीले जानकारी दिए। गत चैत ६ गते भारतको दिल्लीबाट आएका ती युवक कर्तव्य..
काठमाडौं। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या पाँच सय नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार शुक्रबार दिउँसो थप २० जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या पाँच सय नाघेको हो। सेती प्रादेशिक अस्पताल, भेरी अस्पताल र विराटनगरको कोसी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप २० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। योसँगै अहिलेसम्ममा नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५०७ पुगेको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको..
कपिलवस्तु, ९ जेठ । कपिलवस्तुमा शुक्रबार कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये दुई जना पत्रकार छन्।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबार बिहान ९ बजे जारी गरेको प्रेस नोट अनुसार कपिलवस्तुमा ९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये बाणगंगा र कपिलवस्तु नगरपालिकाका २४ र २९ वर्षका दुई पत्रकारमा पनि कोरोना देखिएको हो।कपिलवस्तुका कोरोना फोकल पर्सन कुमार थापाका अनुसार बाणगंगा नगरपालिकामा शुक्रबार पहिलो पटक संक्रमण..
काठमाडाैं, ९ जेठ । शुक्रबार नेपालमा थप तीस जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै सङ्क्रमित को सङ्ख्या ४ सय ८७ पुगे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।​ ..
बुटवल, ९ जेठ । गुल्मीका कोरोना संक्रमित ४१ वर्षीया पुरुषको मृत्यु भएको छ। बुटवलको क्रिमसन अस्पतालमा उनको मृत्यु भए पनि शव व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। मृतकका आफन्तले अस्पतालको लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै शव उठाउन मानेका छैनन्। जेठ १ गते अस्पतालमा भर्ना गरिएका मृतकलाई भेन्टिलेटरमा उपचार गरिएको अस्पतालले जनाएको थियो। उपचारकै क्रममा बिहीबार बिहान सवा ७ बजे उनको मृत्यु भएको..
काठमाडौं, ९ जेठ । नेपालमा थप ३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बाँके र कपिलवस्तुका गरी ३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । याेसँगै काेराेना संक्रमितकाे संख्या ४ सय ५७ पुगेकाे छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार भेरी अस्पताल नेपालगन्ज र प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रुपन्देहीमा गरिएको परीक्षणमा उनीहरुमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । जसमा बाँकेको नरैनापुर ३ का ३२..
बाँके, ९ जेठ। बाँके जिल्लाका पहिलो संक्रमित ६० वर्षीय व्यक्तिसँगै २१ जना कोरोनाबाट निको भएका छन्।बाँकेस्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुराको आइसोलेसन वार्डमा उपचाररत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका २१ जनाको पुनः परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाले डिस्चार्ज गर्न लागिएको बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताए। ‘उहाँ सबै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकै हुनुहुन्छ,’ श्रेष्ठले भने ‘ रि टेष्ट गर्दा उहाँहरुको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुँदा केही..
धनगढी। भारतलगायतका ठाउँबाट नेपाली धमाधम फर्किन थालेपछि उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, खाना र स्वास्थ्य जाँचलगायतको व्यवस्थापन गर्ने चुनौती देखिन थालेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको गड्डाचौकी र गौरीफन्टा सीमानाका हुँदै भारतबाट नेपाली भित्रिनेक्रम पछिल्ला दिनमा बढेको छ। यसबाहेक नेपालका कपिलवस्तु, सप्तरी, सिराहालगायतका जिल्लाबाट कैलाली फर्किने पनि बढ्न थालेका छन्। गएको तीन दिनमा भारतबाट गौरीफन्टा नाका हुँदै भित्रिएकालाई क्वारेन्टाइनका रुपमा प्रयोग गरिएका विद्यालयमा राखिएको कैलालीको..
काठमाडौं। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४५३ पुगेको छ। आज दिउँसो थप ९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या ४५३ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले दिएको जानकारी अनुसार झापामा आठ र रुपन्देहीमा एक गरी नयाँ थप नौ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। झापाको लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा माविको क्वारेन्टाइनमा रहेका आठ जनामा..
बुधबार, जेष्ठ ७, २०७७ साल
काठमाडौं। नेपालमा बुधबार थप २५ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले बाँके, धनकुटा, कपिलवस्तु र नवलपरासी (पश्चिम) जिल्लामा नयाँ २५ जना सङ्क्रमित फेला परेको जानकारी दिए। नयाँ थपिएकासँगै कुल सङ्क्रमित ४२७ जना पुगेका छन्। थपिएका सङ्क्रमित तीनदेखि ४८ वर्षका १८ पुरुष र सात महिला रहेका प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिए। नयाँमा तीन बालिका छन्।..
काठमाडौं, ७ जेठ । महानगरीय प्रहरी वृत्त, कालिमाटीका दुई जना प्रहरी अधिकृतमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि कम्तिमा डेढ सय प्रहरी अधिकृतलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त, कालिमाटी, कालिमाटी महिला सेल, ट्राफिक प्रहरी प्रभाग, मातहतको बल्खु, कलंकी र स्यूचाटारका प्रहरीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो । सबै प्रहरी अधिकृत क्वारेन्टाइनमा राखिएपछि महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीले थप मद्दत टोली कालिमाटी पठाएको छ । प्रहरी कार्यालय पनि शिल..
काठमाडाैं, ७ जेठ। अब पैसा तिरेर आफ्नो इच्छाअनुसार कोरोना जाँच गर्न सकिने भएको छ । सरकारले पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउने क्रममा नीतिगत निर्णय गर्दै आफै पैसा तिरेर कोरोना जाँच गराउन चाहनेलाई बाटो खोलिदिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.विकास देवकोटाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुबाट गोपनीयता कायम गर्ने र नियमित रिपोर्टिङ गर्ने सर्तमा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई परीक्षणको अनुमति दिएको बताए । लक्षण..
काठमाडाैं, ७ जेठ । नेपालमा पहिलोपटक उपचारमा संलग्न डाक्टरलाई नै कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौंको टेकुस्थित इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा कार्यरत एक डाक्टरलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘उहाँसँग सम्पर्कमा भएकाहरुलाई पनि अब आइसोलेसनमा राख्छौं,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समीरकुमार अधिकारीले भने। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा कार्यरत ती डाक्टर ललितपुरको पाटनमा बस्दै आएका..
काठमाडौं। नेपालमा पहिलो पटक डाक्टरमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा टेकुमा कार्यरत एक चिकित्सकमा कोरोना पुष्टि भएको हो। चिकित्सक ललितपुर निवासी हुन्। मंगलवार स्वास्थ्य मन्त्रालयले ललितपुरका एक जनामा कोरोना पुष्टि भएको बताएको थियो। मंगलबार उपत्यकामा ५ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। जसमध्ये एक जना चिकित्सक हुन्। कोरोना भाइरस संक्रमितको कन्ट्याक ट्रेसिङमा संलग्न डाक्टरलाई कोरोना देखिएको हो।..
कपिलवस्तु, ६ जेठ । नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ३७९ पुगेको छ । मंगलबार बिहान कपिलवस्तुमा ४ जना संक्रमित थपिएका छन् । मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का ३ जना र वडा नम्बर ३ का १ जना थपिएका हुन् । संक्रमितहरु २० देखि ४५ वर्षका रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्गर्तत स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ । यीसंगै कपिलवस्तुमा संक्रमितको संख्या ४७ पुगेको..
काठमाडाैं, ६ जेठ । नेपाली सेनाले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चीनबाट खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्री आज काठमाडौं आइपुग्ने भएको छ । सेनाले स्वास्थ्य समाग्री ल्याउन नेपाल एयरलान्सको वाइडवडी जहाज सोमबार बेलुकी चीनको ग्वान्जा पठाएको थियो । वाइडबडी जहाजमार्फत् १८ टन मेडिकल सामग्री ल्याइने र त्यसको सबै प्रक्रिया पूरा भएको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले बताए । यसअघि सेनाले ग्वान्जाओबाट १०..
काठमाडाैं, ६ जेठ । बेलायतको जनस्वास्थ विभागले अब स्वाद र गन्ध यी दुबै थाहा नपाउनु पनि कोरोनाको लक्षण भएको पुष्टि गरेको छ । सोमबार यहाँको नेशनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) ले आधिकारिकरूपमा सो कुरा बताएको हो । यसअघि यी लक्षणलाई एनएचएसले समावेश गरेको थिएन । गत महिना यी लक्षण पनि कोरोनासँग सम्बन्धित हुनसक्ने अनुमान मात्रै गरिएको थियो र पुष्टिका लागि थप अनुसन्धान..
काठमाडाैं, ५ जेठ । कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोककी महिलाका १३ दिने शिशुसहित परिवारका चार जना सदस्यको कोरोना नेगेटिभ देखिएको छ। धुलिखेल अस्पतालमा गरिएको पिसिआर परीक्षणमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको अस्पतालका प्रवक्ता डा. सुमनराज ताम्राकारले बताए। २९ वर्षीय ती सुत्केरी महिलाको मृत्युपछि कोरोना भएको पुष्टि भएपछि शिशुसहित परिवारका चार जना सदस्यलाई आइसोलेसनमा राखिएको थियो। परिवारका बाँकी सदस्यमा मृतककी श्रीमान, आमा र बहिनी छन्। नतिजा..
काठमाडाैँ, ५ जेठ । पुन: ९जनामा काेराेना संक्रमणकाे पुष्टी भएकाे छ । याेसँगै नेपालमा काेराेना संक्रमितकाे संख्या ३ सय ४ पुगेकाे छ । साेमबार बिहान पुनः ९ जना संक्रमित थपिएकाे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएकाे हाे । हालसम्म नेपालमा २ जनाले काेराेनाकाे संक्रमणबाट ज्यान गुमाइ सकेका छन् । ..
काठमाडौं, ५ जेठ । काठमाडौंको कपन क्षेत्रकी एक महिलालाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि उक्त क्षेत्र सिल गरिएको छ। बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको वडा नम्बर १२ मा पर्ने तेन्जिङ चोकदेखि फैका चोकसम्म अर्को व्यवस्था नभएसम्म सिल गरिएको वडा कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको हो। वडा नम्बर १० र ११ पनि जेठ पाँच गते रातीबाट सिल गर्ने तयारी भइरहेको उक्त कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सिल गरिएको अवस्थामा कसैलाई..
भक्तपुर, ५ जेठ । नेपाल कोरियामैत्री अस्पतालले सञ्चालनमा ल्याएको पिसिआर मेशिनसहितको ल्याबमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा भक्तपुरका क्रियाशील पत्रकारको नतिजा नेगेटिभ आएको छ । मध्यपुरथिमि नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित उक्त अस्पतालमा गत शुक्रबार भक्तपुर जिल्लाका कार्यरत २९ पत्रकारको स्वाब सङ्कलन गरी पिसिआर परीक्षण गरिएको थियो । ल्याबले आइतबार नतिजा सार्वजनिक गर्दै परीक्षण भएका सबै पत्रकारको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिए..
कपिलवस्तु। त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचारका क्रममा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएकी कपिलवस्तु वाणगंगाकी ६ वर्षीया बालिकाका अभिभावकमा कोरोना नेगेटिभ देखिएको छ। कपिलवस्तुबाट उपचारका लागि काठमाडौं पुर्‍याइएकी बालिकामा संक्रमण अस्पतालबाटै भएको हुन सक्ने देखिएको छ। वाणगंगा-४, ठाकुरापुरकी कोरोना संक्रमित बालिकाका हजुरबुबा र हजुरआमाको कोभिड-१९ परीक्षण रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ आएको जानकारी प्राप्त भएको वाणगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख चक्रपाणि अर्यालले बताए। बालिकाका हजुरबुबाले नातिनीको पुनः एकपटक परीक्षण..
काठमाडौं। कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएका बर्दियाका २८ वर्षीय पुरुष काठमाडौं, कालीमाटीका व्यवसायी भएको पत्ता लागेको छ। जिल्ला सदरमुकाम गुलरिया नगरपालिका ११ लालपुरका स्थायी बासिन्दा उनी बन्दाबन्दीमा घर आएका र पाँच दिनअघि काठमाडौं फर्किएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। काठमाडौंमा स्वाब परीक्षणपछि मात्र उनमा कोरोनाको संक्रमण भएको पुष्टि हो। उनलाई कोरोना पुष्टि भएपछि लालपुर शनिबार दिउँसोदेखि बन्द गरिएको छ। कालीमाटीमा राँगाको मासु..
कञ्चनपुर, ४ जेठ । कञ्चनपुरमा बन्दाबन्दीका बेला भारतबाट आएका ६२३ जना क्वारेन्टाइन अवधि पूरा गरी घर फिर्ता भएका छन् । भारतबाट फर्केकाहरु जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टाइनमा १४ देखि २१ दिनसम्म बसेर घर फिर्ता भएका हुन् । क्वारेन्टाइनमा बस्दा खानपानको सम्पूर्ण व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाएका थिए । क्वारेन्टाइनमा बस्नका लागि आउँदा सामान्य स्वास्थ्य जाँच गरिएकालाई आरडिटी परीक्षणपश्चात घर फिर्ता गरिएको छ..
काठमाडाैँ, ४ जेठ । नेपालमा काेराेना भाइरस (काेभिड-१९) संक्रमितकाे संख्या २९१ पुगेकाे छ । आइतबार बिहानै १० जना संक्रमित थपिएकाे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएकाे छ । उनीहरू सबै राैतहट निवासी रहेकाे मन्त्रालयकाे भनाइ छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयाेगशाला, काठमाडाैँमा गरिएकाे परीक्षणबाट उनीहरूमा काेराेना संक्रमण पुष्टि भएकाे हाे । जसमध्ये राैतहटकाे राजपुर न.पा. फरहदवा- ९ निवासी १८ वर्षदेखि ४८ वर्ष उमेर समूहका ७..
काठमाडौं, ३ जेठ। सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेकी एक सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएपछि त्यहाँका तीन वडा सिल गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोकले बाह्रविसे नगरपालिकाको ९ राम्चे, बलेफी गाउँपालिकाको ७ र ८ सिल गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले जानकारी दिए। अब ती वडाबाट कोही व्यक्ति बाहिर आउन र वडाभित्र प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। धुलिखेल अस्पतालमा २९ वर्षकी सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको छ। कोरोना..
कपिलवस्तुमा थपिए पुनः ३ जना कोरोना संक्रमित, संक्रमितकाे संख्या २७६ पुग्यो
काठमाडौं, ३ जेठ । कपिलवस्तुमा शनिबार बिहान थप ३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । थपिएका नयाँ संक्रमितहरुमा कपिलवस्तु, शिवराज नगरपालिका चन्द्रोटा निवासी २५, ३४ र ४४ बर्षीय पुरुषहरु रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, भैरहवामा गरिएको थ्रोट स्वाब परीक्षण अनुसार उनीहरु ३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । संक्रमितहरु सबै जना अहिले स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा रहेको र स्वास्थ्य..
Results 1452: You are at page6of 49